Pocket Anatomy, maimaim-poana amin'ny fotoana voafetra | Vaovao IPhone
Manohy amin'ny fampiharana kalitao izahay izay afaka misintona maimaimpoana mandritra ny fotoana voafetra. Omaly dia nampahafantariko anao ny momba ny rindrambaiko TwisteddWave, fampiharana hanovana rakitra audio izay mandritra ny fotoana voafetra (tsy misy intsony izany ho fisintomana maimaimpoana), azontsika atao ny misintona maimaimpoana ary mamonjy ny 9,99 euro vidiny. Androany isika dia miresaka momba ny fampiharana iray hafa izay misy vidiny lafo: Pocket Anatomy: Interactive Human Anatomy, izay misy vidiny mahazatra ao amin'ny App Store 14,99 euro, fa mandritra ny fotoana voafetra dia afaka maka maimaim-poana tanteraka isika. Miaraka amin'ny Pocket Anatomy dia afaka mivezivezy avy amin'ny sosona hoditra isika, mankamin'ny taova anatiny, ny ligament ary ny rafi-taolana, mamakivaky ireo karazana musculature samihafa.
Misaotra an'i Pocket Anatomy mba hanomezana fahafaham-po ny fahaliananay momba ny atin'ny vatan'olombelona, ankoatry ny fampianarana ny kely indrindra amin'ny trano ny fiasan'ny vatantsika sy ny taova samihafa mamorona azy miaraka amin'ny fiasan'izy ireo. eMedia, mpamorona an'ity rindranasa ity sy ny hafa mifandraika amin'ny atin'ny hoditr'olombelona, ​​dia miara-miasa amin'ireo matihanina amin'ny fahasalamana, mpanabe ary marary hahafahana mamolavola an'io sy ny sisa amin'ireo rindranasa hita ao amin'ny App Store.
Endri-javatra Pocket Anatomy
Pocket Anatony, izay mila habaka 700 MB farafahakeliny amin'ny fitaovantsika, mamela antsika hiditra amin'ny fampahalalana rehetra tsy mila fifandraisana Wi-Fi na 3G / 4G.
Manome antsika fivezivezena intuitive hahafahana mahita haingana izay tadiavintsika.
Manana teny fikarohana 100.000 XNUMX mahery, amin'ny teny anglisy ihany.
Azo atao ny mamorona naoty manokana ao anaty ny fampiharana.
Ny fizarana atiny eo amin'ny fitaovan'ny iOS dia azo atao amin'ny Pocket Anatomy.
Io dia ahafahantsika mamorona gadona fianarana manokana.
Ao anatin'ny fampiharana dia afaka mahita fividianana rindrambaiko isan-karazany isika hahafahana miditra amin'ny horonan-tsary momba ny fiasan'ny vatantsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Pocket Anatomy, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Misaotra, hametraka azy aho.
Heist of the year: namorona an'i Apple ho an'i Tesla ny mpamorona haingana